मासु नखाए के हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
मासु नखाए के हुन्छ ?
विरामीका लागि जामुन अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । यसले मधुमेहलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिने आयुर्वेदको दाबी छ । जामुनुको बाहिरी बोक्रा निकाल्नुहोस् र भित्रको वियालाई...